Blogger of this week: Sabin Singh - MeroReport
Blogger of this week: Sabin Singh
कपिलवस्तुका सबिन सिंह हाल भक्तपुरमा बस्छन् । उनले रसायनशास्त्रमा स्नातक गरेका छन । उनले वि सं २०६२ देखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, धादिङबाट निजामती सेवा प्रारम्भ गरेका सबिन संविधानसभा निर्वाचनपश्चात राजधानी मै रहेका छन । संगीत सुन्न, गजल लेख्न र फोटोग्राफी गर्न रुचाउने सबिन यस साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन ।
सर्वप्रथम मेरिरिपोर्टको साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ । साताको ब्लगर हुनुभएकोमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
ब्लगरको रूपमा पहिचान गरेकोमा धन्यवाद छ मेरोरिपोर्टलाइ । एउटा रहरको रूपमा ब्लगिङ्ग शुरू गरिएको थियो अब भने लेखनप्रति जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको छ ।
अब तपाईंको ब्लगिङको इतिहासको कुरा गरौँ । तपाईंले कहिले देखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
मेरो साहित्य लेखनमा रूची बढेको सन् २००९ तिर हो । मेरो ब्लगिङ्ग शुरू भएको पनि त्यही ताका हो ।
ब्लग एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँबाट मनका कुरा ढुक्क भइ खुलेर गर्न पाइन्छ । व्यस्त र यान्त्रिक हुँदै गएको वर्तमान समाजमा एकआपसमा विचार, भावना विनिमय गर्न, भेटघाट, जमघट गर्न समय निकाल्न गाह्रो छ । ब्लगमार्फत आफ्ना भावना र विचार सबैसँग बाँड्न पाइन्छ र कहिले त यो छलफल र बहसको थलो पनि बन्दछ । यही कारण हाल ब्लग मेरो प्रिय थलो भएको छ ।
ब्लग सुरु गर्दा आफ्नो साहित्य सिर्जना मात्र बाँडिन्थ्यो । धेरै समयसम्म मैले ब्लगमा आफूद्वारा रचिएका गजल, कविता र गीत मात्र बाँडे । हालै मात्र लेख र कथाहरू लेख्न शुरू गरेको छु । दैनिकीमा घटेका विभिन्न घटनालाइ अलिकति काल्पनिकता मिसाएर रमाइलो बनाएर लेख तथा कथाको रूपमा ब्लगमा समावेश गरेको छु । गजल, गीत कविता विधाका साहित्य सिर्जना, सत्य घटनामा आधारित कथाहरू नै मेरो ब्लगको प्रमुख विषयवस्तु हो । अब चाँडै नै आफ्नो फोटोग्राफीलाइ पनि ब्लगमा समावेश गर्ने सोच बनाएको छु ।
आफ्नो ब्लगको नाम एकतारे राख्नु भएको छ ? यसको कारण के होला ?
एकतारे मेरो साहित्यिक उपनाम हो । एकतारे एउटा मात्र तारले बनेको बाजा हो । एक्लो भएर पनि सुमधुर संगीत दिन सक्ने यो बाजाले समग्रमा म र मेरो विचारलाइ प्रस्तुत गरेको छ । तसर्थ ब्लगको नाम पनि एकतारे नै जुराएको हो ।
तपाईंको ब्लगमा के के समावेश भएका छन ? आफ्नो ब्लगको बारेमा बिस्तृत रुपमा बताइदिनुस न ?
ब्लग सामान्य टेम्पलेटमा आधारित छ । वेवडिजाइनको ज्ञान धेरै नभएकोले ब्लगरद्वारा उपलब्ध Feature नै प्रयोग गरेको छु । ब्लगपोस्ट विषयवस्तु अनुसार हेर्न मिल्ने, खोज्न मिल्ने र धेरै पढिएको पोस्टहरू सजिलै पढ्न मिल्ने छन् । मैले रूचाएका र बारम्बार पढिरहने ब्लगको लिंकहरू पनि समावेश गरेको छु । अनावश्यक फोहोर नदेखियोस् भन्नेमा ध्यान पुर्याउँछु । साथै टिप्पणी र अन्य सामाजिक सञ्जालमा सजिलै बाँड्न सकिन्छ मेरो ब्लगपोस्टहरू । हालैमात्र एउटा चलचित्रको Preview लेखेपछि अश्लिल र आपत्तिजनक टिप्पणीहरू आएपछि टिप्पणीहरू Moderation गरेर मात्र पोस्ट गर्ने गरेको छु ।
मेरो पछिल्लो पोस्ट "फ्रस्टेसन" शीर्षकमा थियो । एउटा क्याफेमा एकजना वरिष्ठ गायक भेट हुनुभएको थियो । विद्यमान सांगितिक बजारप्रति वहाँको आवेग सुन्न पाइयो । त्यही घटनामा आधारित भएर सो पोस्ट लेखिएको थियो ।
शुरूवाती अवस्थामा गजलमात्र पोस्ट हुने र साथीहरूलाइ ब्लग लेख्छु भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थामा ट्राफिक एकदम कम थियो । हाल आएर आफ्नो ब्लगबारे साथीहरूलाइ जानकारी दिन थालेको छु । अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि ब्लगपोस्टका बारेमा जानकारी दिन्छु । यसले ट्राफिक बढाएको छ । केही अघि एउटा चलचित्रको Preview लेखेपछि सो ब्लगपोस्टको चर्चा धेरै व्यक्तिमाझ चल्यो । हाल नियमित रूपमा पोस्टहरू आउने कारणले पनि होला उल्लेख्य रूपमा पाठक बढेका छन् । प्रत्यक्ष टिप्पणी, इमेल र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि पाठकहरूले सकारात्मक/नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
तपाईंलाई के लाग्छ ब्लगिङले समाजमा केही प्रभाव पार्न सक्छ ? सक्छ भने कसरी ?
अहिले मान्छेसँग समय छैन । भेटघाट जमघट मार्फत विचार विनिमय गर्ने चलन हराउँदैछ । यो सन्दर्भमा ब्लगिङ्गमार्फत विचार साटासाट हुने हुँदा यसले मान्छे सामाजिक प्राणी हुनुको सार्थकता कायम राखेको छ । साथै ब्लगिङमार्फत स्वतन्त्र विचार सम्प्रेषण गर्न अझ सजिलो भएको हुँदा यसले पक्कै पनि अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । समग्रमा समाजको विकासमा ब्लगिङ्गले सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुइमत नहोला ।
पक्कै पनि ब्लगिङ्ग प्रवृत्ति बढ्नुमा इन्टरनेटको पहुँच जताततै पुग्नु हो । मेरो समकालिन साथीहरू निजामती सेवाको क्रममा देशका विभिन्न दुर्गम ठाउँमा हुनुहुन्छ । त्यहाँको जिवनशैली, अनुभव ब्लगमार्फत गर्नुहुन्छ र मैले त्यो अनभुवहरू अनुभूती गर्न पाएको छु । सूचना, जानकारी, अनुभव, अनुभूती, विचार आदीको विनिमयका लागि ब्लग एउटा उत्तम माध्यम हो र धेरैले यो बुझ्दै गएका छन् । म आफै पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल डुल्दा डुल्दै ब्लगिङमा पुगेको छु र यसमा रमाइरहेको छु ।
नेपाली ब्लग क्षेत्र उज्जवल छ । विचारको आदानप्रदान मात्र हैन, प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्लगहरू पनि आएका छन् । विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी र ज्ञान बाँड्ने चौतारोको रूपमा समेत ब्लग विकास हुँदै गएमा यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ
ब्लग भनेको आफ्नो धारणा र अभिव्यक्ती स्वतन्त्र व्यक्त गर्न ठाउँ हो। हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
आचारसंहिता बन्नु एकदम राम्रो कुरा हो र यो पक्कै पनि जरूरी छ । अनुशासन हरेक क्षेत्रमा चाहिन्छ । आचारसंहिता बनेपछि ब्लगर स्वंय नियन्त्रित भएमा यस क्षेत्रमा देखिएका वा देखिन सक्ने विकृतिबाट टाढै बस्न सक्नेछन् । मनको वहमा बग्दै जाँदा अनियन्त्रित भइ अमर्यादित रूपमा अरूलाइ नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी लेखिन सक्छ, आचारसंहिता भएपछि पक्कै पनि यो रोकिनेछ ।
मेरोरिपोर्ट संभवत नागरिक पत्रकारितालाइ प्रवर्द्धन गर्ने शायद पहिलो प्रयास हो । अझै पनि नेपालीहरू लोकतन्त्रको अभ्यासमै छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रोत्साहन गर्ने यो प्रयास सह्रानिय छ । यसले पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन तिर समाजलाइ डोर्याउने छ ।
मेरोरिपोर्टको प्रयासहरूलाइ मेरो धन्यवाद र आउँदो दिनको प्रगतिका लागि शुभकामना । मेरो तर्फबाट हुनसक्ने योगदानका लागि कन्जुस्याइ गर्ने छैन । इन्टरनेट सेवा सबै नेपाली नागरिकको पहुँचमा छैन, मेरोरिपोर्टको प्रयासलाइ इन्टरनेटभन्दा बाहिर पनि लाने हो कि ?
सबिनको ब्लग लिन्क : http://ektaare.blogspot.com/
Comment by sabinsingh on March 14, 2012 at 11:11pm
Comment by एसवी गौतम on March 11, 2012 at 12:27pm
Congratulation sabin ji.
Comment by sabinsingh on March 10, 2012 at 11:09pm
धन्यवाद मेरोरिपोर्ट तथा सम्पूर्ण सहृदयी मित्रहरूलाइ :)
Comment by ramesh khatri on March 8, 2012 at 7:22pm
Comment by Pagal Basti on March 8, 2012 at 4:29pm
बधाइ है हाम्रो पनि
Comment by Ajeeta Sigdel on March 8, 2012 at 4:17pm
Comment by Amuna Chapagain on March 8, 2012 at 3:13pm
badhai6sabin ji
Comment by Indra Dhoj Kshetri on March 8, 2012 at 3:08pm
Congratulations Sabinji. Look forward to reading more.
Comment by Equal Access on March 8, 2012 at 2:49pm
Congratulation Sabin Ji!!